Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: January 2012
မွန်ပြည်သစ်ပါတီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ.ပတ်သက်၍ BURMA VJ Media သတင်းအသုံးအနှုန်းကြောင့်ငြင်းခုံနေကြ
မွန်ပြည်သစ်ပါတီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ.ပတ်သက်၍ BURMA VJ Media
သအောက်ပါဘာမာဗီဂျေသတင်းကသုံးနှုန်းထားသည့်အသုံးအနှုန်းကိုမရှင်းမလင်းဖြစ်နေကြသည်၊ အစိုးရ နှင့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဌ နိုင်ရောစ ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့ Strand Hotel ၌ နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် စတင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ အဲ့ဒီ အစည်းအဝေးအတွင်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို သဘောတူဆွေးနွေး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး အခု ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအကြိမ်မှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ဆခရဘူရီမြို့၌ အထက်ပါ နှစ်ဖွဲ့မှာ ဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
By: Burma VJ Media Network
Aow Kou Rot မီဒီယာကို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို မျှတချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြသင့်ပါတယ်။ Process တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည် ရပါတယ်။ သတင်းတွေရဲ့ details တွေကိုလဲ သိနိုင်သလောက် နှိုက် ထုတ်ရပါတယ်။ "နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို သဘောတူ ဆွေးနွေး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်" ဆိုတာ အရမ်းကို မှားနေတဲ့ အရေးအသားပါ။ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အဲလောက်ထိ လုပ်ဆောင်ခွင့် မပေးထားတာ သဘောပေါက် ထားစေလိုပါတယ်။ ကေအန်ယူ ပွဲတုန်းကလဲ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဲဒီလို သုံးနှုန်းရေးသားတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံကို ကောင်းအောင် ငြိမ်းချမ်းအောင် လူတိုင်း ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ မိမိဆန္ဒစွဲနှင့် မရေးသင့်ပါ။ သတင်းကို သတင်းလို ရေးစေချင်ပါတယ်။ လိုရာကို တွန်းပြီးရေးတာမျိုးဟာ ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေလို့ မိမိကိုယ်ကို လွပ်လပ်မျှတတဲ့ မီဒီယာအနေနဲ့ ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် အသုံးအနှုန်းတွေ အချက်အလက်တွေကအစ တိကျ သေချာဖို့ လိုပါတယ်လို့ အကြုံ ပြုပါရစေ။ မီဒီယာကို အစဉ်လေးစားလျက်
Thandar Phyu အရမ်းမှန်တာဘဲ။ အရးအသားတွေက ကိုယ်လိုရာ ဆွဲပြီးရေးနေသလိုဘဲ။
Nyan Lin Oo ဘာလို့လဲ? ဆွေနွေးပြီး လက်မှတ်ထိုးတာ တကယ်မဟုတ်ဘူးလား? KNU လဲလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီလေ။ ဘာတွေကိုဆိုလိုချင်တာလဲ?
Nyan Lin Oo ဒါဆို KNU က အတု လက်မှတ်ထိုးတာပေါ့။ ဗညာ ဃံင်သာင်ဇေတ်ဍာံ ဟာ ရှုပ်ကုန်ပီကွာ ၊ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့လှည့်ကွက်အောက်မှာ တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်၊ တိုင်ရင်သားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေ သတိထားပြီး လက်မှတ်ထိုးပါလို့ အကြံပြုချင်တယ်။
ow Kou Rot ကိုဥာဏ်လင်းဦး ဒီအချက်အပေါ်ကို စိတ်ဝင်းစားမယ်ထင်လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ထိုးခဲ့တဲ့လက်မှတ်ဟာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အတွက်မဟုတ်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူတဲ့လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကေအန်ယူနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေရဲ့ ဘောင်ကျော်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြသနာ တက်နေဆဲပါ။ ဘယ်လိုပြန်လည် ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ ကေအန်ယူဗဟိုမှာ အရေးပေါ် ဒုတိယအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြ တယ်။ နောက်တစ်သုတ် အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လည်း ရွေးခဲ့တယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်း သတ်မှတ် ချထားခဲ့တယ်။ ဆိုတော့ အရင် ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေရဲ့ အရေးအသားကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် "အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးတယ်" ဆိုတဲ့ အရေးအသားဟာ အစိုးရဘက်က ဝါဒဖြန့်ချီဖို့ ရေးတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် သတင်းထောက်တွေ ကိုယ်တိုင်က ဒီအချက်အပေါ် မရှင်းလို့ ရေးကြတာလားတော့ ကျွန်တော် မသိပါ။ အရေးကြီး မှတ်သားစရာ တစ်ချက်က " ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အာဏာကုန်အပ်ပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ကြိုက်သလို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်" လို့ ဘယ်နိုင်ငံရေး ပါတီကမှ ချမှတ်ထားခြင်း မရှိဘူး ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ ဆွေးနွေးချက်တွေကို သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ညှိုပြီး ရရှိတဲ့သဘောတူညီချက်ကို အထက်ကို တင်ပြဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို နားလည် စေချင်ပါတယ်။
Tineyintharvoice Ethnicnationalitiesvoice မီဒီယာတိုက်ပွဲအောက်မှာနာမည်ပျက်နိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲများနဲ.ပတ်သက်၍အမှန်အတိုင်းဖော်ပြရန်ကေအိုင်အိုရော၊ကေအန်ယူပါတောင်းဆိုခဲ့သည်၊ဒါကြောင့်၊တိုင်းရင်းသားမီဒီယာများအနေနဲ.ပိုမိုလုပ်ဆောင်ဖို.လုပ်အပ်ပါသည်၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြာခင်မှာမွန်ပြည်သစ်ပါတီကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်လို.မျှော်လင့်ပါလျက်
သတင်း Breaking News, သတင်း။ News
ပဏာမငြိမ်းချမ်းရေးကာလ တိုက်ပွဲများကြောင့် အစိုးရမရိုးသား ဟု ကေအန်ယူ ပြော
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ပဏာမသဘောတူညီမှု ရပြီးသော်လည်း ကရင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေခြင်းသည် မြန်မာအစိုးရ၏ မရိုးသားခြင်းကို ဖော်ပြနေကြောင်း ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ)က ပြောကြားလိုက်သည်။ “အခုဟာ လက်မှတ်ရေးထိုးတုန်းက အားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့် ခုလို အောက်က လူတွေ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေတာတေ့ာ မကောင်းဘူး။ မရိုးသားတဲ့ သဘောတွေ တွေ့ နေရတော့ ဘယ်အပိုင်း မရိုးသားတာလည်းဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာ နေပါ တယ်။”ဟု ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောဒေးဗစ်သာကပေါ် က YPI သို့ပြောသည်။ မြန်မာအစိုးရနှင့် ကေအန်ယူတို့သည် ယခုလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပဏာမသဘောတူညီမှု အတွက် ဘားအံမြို့၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ကရင်ပြည်နယ် တောင်ငူ နှင့် ညောင် လေးပင် အရှေ့ ဘက် တောင်ပေါ် ကရင်ရွာများတွင် အစိုးရတပ်နှင့် ကေအန်ယူ တို့ တိုက် ပွဲငယ် ၅ကြိမ် ထက် မနည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ။ ထို့အပြင် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ၄င်းတို့ ၏ နယ်မြေများသို့ အစိုးရ စစ်တပ်များ ထပ်မံစေလွှတ်ခြင်း၊ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းနှင့် စစ်ရေးလမ်းကြောင်း များ ထပ်မံဖောက်လုပ်ခြင်း မပြုသင့်တော့ကြောင်းလည်း ဦးစောဒေးဗစ်သာကပေါ် က ပြောသည်။ အစိုးရတပ်များ ရိက္ခာပို့သည်ကို ကေအန်ယူမှ မတိုက်ပါဟု ပြောခဲ့သော်လည်း အစိုးရဘက်မှ လက်နက်ကြီးနှင့် ပစ်ခဲ့သည့်အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရကြောင်း၊ “သေနတ်နဲ့ခေါင်းကို တည်ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး ဆွေးနွေးတာ မျိုးတော့ မဖြစ်စေချင်”ကြောင်း ဆက်ပြောသည်။ ထိုကြောင့် ပဏာမသဘောတူညီမှုအပြီး ၄၅ရက်အတွင်း ပြုလုပ်မည်ဟု ကတ်ိက၀တ် ရှိထားသည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် အပစ်အခတ်လုံးဝ ရပ်စဲ ရေးကိုသာ ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ “ စာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကို တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတော့ အစိုးရနဲ့ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်တာတေ့ာ အမှန်ပဲ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုတာ ခိုင်မာဖို့လိုတဲ့အတွက် အဲဒါ ကိုပဲ ဆွေးနွေးရေးတွေ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ ”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ ထို့အပြင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များသည် အချိန်မရွေး ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့် အတွက် အစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်အပေါ် များစွားစဉ်းစားရမည် ဟု လည်းဆိုသည်။ ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ကရင်နီ(ကယား)လက်နက်ကိုင်တပ်များနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူညီပြီး တစ်လအတွင်း ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သလို ကချင်လက်နက်ကိုင်တပ် များ နှင့် ၁၇နှစ်တိုင်အောင် တည်တံ့ခဲ့သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှာ မကြာခင်က ပျက်ပြားခဲ့ရသည် ဥပမာများလည်း ရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ တိုက်ပွဲငယ်များအပြင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအဖြစ် အစိုးရတပ်များမှ အဓမ္မ စေခိုင်းမှုများလည်း ရှိနေသည်ဟု ၄င်းက စွပ်စွဲပြောကြားသည်။ ကေအန်ယူသည် အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရန် ၁၉၄၉မှစ၍ မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်ကို နိုင်ငံရေးအရတော်လှန်ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၂ (YPI)
ကရင့်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး အဖူး စောဘဦးကြီးနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက် (အင်တာဗျူး) ပထမပိုင်း
အဲခေါင်သောင့်ဘလော့မှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ http://ehkhaungthaunt.blogspot.com/2012/01/blog-post_19.html
စောသစ္စာထူး။ ။KNU ခေါင်းဆောင်တချို့ အပစ်ခတ် ရပ်စဲတာကို အဖူး စောဘဦးကြီး အားရ ကျေနပ်မှု ရပါသလား။
စောဘဦီးကြီး။ ။ အားရ ကျေနပ်မှု ရလား၊ မရလား မပြောခင် KNU ခေါင်းဆောင်တွေကို အရင်ဦးဆုံး ပြောချင်တာကတော့ အဖူးဟာ မိသားစုနဲ့တကွ စည်းစိမ် ချမ်းသာတွေကို စွန့်လွတ်ပြီးတော့ ကရင့် တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့တာပါ။ အဖူး မိသားစု ချမ်းသာဖို့ သူဌေးဖြစ်ဖို့ အတွက် တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ချမ်းသာဖို့ အတွက် တော်လှန်ရေး လုပ်ရင်တော့ ရှင်းရှင်းပဲ ပြောလိုက်မယ် လမ်းမှားနေပြီး။ အခု စစချင်း လှမ်းတဲ့ ခြေတလှမ်းဟာ မမှားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ “ခြေလှမ်းမှားခြင်း အားလုံးထဲမှာ နိုင်ငံရေး ခြေလှမ်းမှားခြင်းဟာ အဆိုးဆုံးပဲ။” အဖူးလည်း ခြေလှမ်း မှားခဲ့သလို ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကို အမျှော်အမြင် ကောင်းတဲ့ မန်းဘဇန်နဲ့ ကရင်ခေါင်းဆောင် တချို့ ပြင်လို့သာပေါ့။ သူတို့သာ မပြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒီအချိန်တုန်းကပဲ ကရင့် တော်လှန်ရေးဟာ အသက်ထွက်သွားပြီး။ အခု အပစ်အခတ် ရပ်စဲတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ လမ်းမှားဘက် ရောက်ဖို့ ပိုများ နေတဲ့အတွက် အားရ ကျေနပ်မှု မရှိပါဘူး။
စောသစ္စာထူး။ ။အားရကျေနပ်မှု ရနိုင်တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုကို အဖူးစောဘဦးကြီး ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
စောဘဦီးကြီး။ ။အားရ ကျေနပ်မှု ရနိုင်တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး စိတ်ထဲမှာတောင် မတိုက်ရဘူး။ ဗမာနယ်မြေမှာ ကရင် လက်နက်ကိုင် မရှိရသလို ကရင် နယ်မြေမှာလည်း ဗမာ လက်နက်ကိုင် မရှိရပါဘူး။ ဒီလို အာမခံ ချက်မျိုးတွေ ရှိရမယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲတဲ့ အချိန်မှာ KNUထိမ်းချုပ် ထားတဲ့ နယ်မြေ အတွင်း လက်နက် ရိက္ခာတွေကို မဟားတရား ဖြည့်တင်းလာတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အခု အပစ်အခတ် ရပ်စဲတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ အဖူးမြင်တယ်။
စောသစ္စာထူး။ အခု အပစ်အခတ် ရပ်စဲလိုက်တာကို အဖူးစောဘဦးကြီး ထောက်ခံပါသလား။
စောဘဦီးကြီး။ ။အခုလက်ရှိအခြေအနေကို ပြောမယ်ဆိုရင် ၁၀၀ မှာ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းပဲ ထောက်ခံပါတယ်။
စောသစ္စာထူး။ ။ဘာကြောင့် ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်အ၀ မထောက်ခံတာလဲ
စောဘဦီးကြီး။ ။အခု ကရင့် တော်လှန်ရေးကို စက်မှုဇုန်နဲ့ လဲရမယ့် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုမှ အပြည့်အ၀ ထောက်ခံလို့ မရဘူး။
စောသစ္စာထူး။ ။ကရင် ဒေသတွေမှာ စက်မှုဇုန်တွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ကရင် လူမျိုးတွေရဲ့ လူနေမှု ဘ၀ တိုးတက်လာမယ် မဟုတ်ဘူးလား။
စောဘဦီးကြီး။ ။အပေါ်ယံ ကြည့်ရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ် အတွင်း ကျကျကို ၀င်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီလည်း မရသေး၊ စစ်မှန်တဲ့ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုလည်း ဖြစ်မလာသေးဘူး။ ဘာနိုင်ငံရေး အာမခံချက်မှ မရှိသေးပဲနဲ့ စက်မှုဇုံတွေ တည်ထောင်မယ်ဆိုရင် တရုတ်၊ ကုလား၊ ဗမာတွေကပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ် ချုပ်ကိုင်ထားကြမယ်။ အဖူးတို့ ကရင် လူမျိုးတွေကတော့ အလုပ်သမား ဘ၀ကနေ ရုန်းထွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နယ်မြေတွေလည်း အများကြီး ပျက်စီး ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။ ဗမာပြည် အထက်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေကို တရုတ်တို့ ၀ါးမြိုထားသလို အဖူးတို့ ကရင်တွေလည်း အခြားလူမျိုး ပေါင်းစုံတို့ရဲ့ ၀ါးမြိုမှုကို ခံရမယ်။ ကရင်ဒေသမှာ ထွက်တဲ့ တွင်းထွက် သဘာဝ သယံဇာတ ပစ္စည်းတွေလည်း အမျိုးပြုတ် သွားနိုင်တယ်။ ကချင်ဒေသက ထွက်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေ တိမ်ကောသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ပိုပြီး ရင်နာစရာ ကောင်းတာကတော့ အဖူးရဲ့ မျိုးဆက်သစ် မြေးနဲ့ မြစ်လေးတွေဟာ မူးယစ် သမားတွေနဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေ ဖြစ်ဖို့ ရှိတယ်။ ဒါဟာ ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ လူနေမှုဘ၀ တိုးတက်မှု အစစ်အမှန် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
စောသစ္စာထူး။ ။ယခု တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တော်တော်များများ အပစ်အခတ် ရပ်စဲတာကိုရော အဖူး ဘယ်လိုမြင်သလဲ။
စောဘဦီးကြီး။ ။ယခုချိန်မှာ ၀၊ မိုင်းလား၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကရင် အစရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ စစ်အာဏာရှင်တွေ အပစ်အခတ် ရပ်စဲလိုက်တာဟာ KIAကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ တိုက်ခိုက် လိုက်တယ်လို့ အဖူးမြင်တယ်။ ဒါကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကြပါ။ KIAသာ အမြစ်ပြတ်ထွက် သွားရင် အပစ် ရပ်စဲထားတဲ့ အဖွဲ့တွေလည်း အမြစ်ပြုတ် ထွက်ဖို့သာ ပြင်ထားပါ။ KIAရဲ့ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကတော့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးထဲမှာ စံပြအဖွဲ့ပဲ။ ဘာနိုင်ငံရေး အာမခံချက်မှ မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာမှ မလုပ်သေးတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ မွန်ပြည် သစ်ပါတီလည်း KIAရဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်မယ်လို့ပဲ အဖူး မျှော်လင့်တယ်။ ဒီလမ်းစဉ်ဟာ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ လမ်းစဉ်ပဲလို့ အဖူးမြင်တယ်။
စောသစ္စာထူး။ ။ ဒါဆိုရင် KNUအနေနဲ့ ဘာဆက်လုပ် သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
စောဘဦီးကြီး။ ။အခုအချိန်မှာ KNUဘာလုပ်သင့်သလဲ မပြောခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခုဘာလုပ် နေသလဲဆိုတာ အရင်ဦးဆုံး ပြောမယ်။ အကျဉ်းထောင်က ထွက်လာပြီး ဒုတိယပင်လုံ ညီလာခံ လုပ်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ကို အတိုက်အခံနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေက ထောက်ခံတယ်။ အာဏာရှင်တွေက မထောက်ခံဘူး။ ဒီလုပ်ရပ်ကို ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖမ်းဆီး ထောင်ချ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခံရဖို့ပဲ ရှိတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း စည်းရုံးရေးမှာ တကြိမ် ဒီပဲယင်းမှာ တကြိမ် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်လိုမှ မေ့ပျောက်လို့ မရနိုင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဗမာပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံး ပြန်လည်စည်းလုံးဖို့ အတွက်ဆိုရင် အသက်ကိုပင် စွန့်လွတ်ဝံ့သူလို့ အဖူး မြင်တယ်။ အခုချိန်မှာတော့ စည်းလုံးမှု ပြိုကွဲပြီး ရန်သူတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ ဗမာ အချင်းချင်းကို ပြန်ပြီး စည်းလုံးအောင် လုပ်နေတယ်။ အခုချိန်မှာ တိုင်းရင်းသား ကိစ္စတွေကို ဦးစား မပေးဘဲနဲ့ ဗမာ အချင်းချင်း ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး၊ ဗမာလူထု တရပ်လုံးနဲ့ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်မပြုတဲ့ ဦးသိန်းစိန်တို့ အဖွဲ့ကို အသိအမှတ်ပြုအောင် လုပ်ပေးနေတယ်။ ဘယ်သူမှ မျှော်လင့် မထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နှင့် လက်အောက် ငယ်သားတွေကို ပြန်လွတ်ပေးတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင်ပုန်ချေရေးကို လုပ်နေတယ်။ ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အဖူးတို့ ကရင်တွေလို ဗမာအချင်းချင်း ပြန်တိုက်ကြတာကို အဖူး မမြင်ချင်ပါဘူး။ ကဲ--ဒါဆိုရင် KNUက အခုချိန်မှာ သူတို့ ဘာလုပ် သင့်သလဲဆိုတာ သိလောက်ပါပြီး။ ဆက်ပြောဖို့ မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်တယ်။
စောသစ္စာထူး။ ။နိုင်ငံရေးအမြင် အားကောင်းတဲ့ လူတွေက သိပေမယ့် နိုင်ငံရေး အမြင် အားနည်းတဲ့ လူတွေက အဖူးရဲ့ ဆိုလိုချက်ကို ကောင်းကောင်း မသိဘူး။ ကေအဲန်ယူ ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး အသေးစိတ် ဖြေကြားပေးပါ။
စောဘဦီးကြီး။ ။နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အမြင် အားကောင်းတဲ့ လူမျိုးတွေက သခင်ဖြစ်မယ်၊ နိုင်ငံရေး အမြင် အားနည်းတဲ့ လူမျိုးတွေက ကျွန်ဖြစ်မယ်။ ဒါကို အရင်ဦးဆုံး သိစေချင်တယ်။ အခုချိန်မှာ ကေအဲန်ယူ လုပ်ရမှာက နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ စေ့စေ့စပ်စပ် သေသေချာချာနဲ့ အချိန်ပေးပြီး အချင်းချင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေကို ဆွေးနွေးရမယ်။ တချို့ အတွေးအခေါ် အယူအဆ တွေဟာ မှားနေတဲ့အတွက် နားလည် ခွင့်လွတ်ပေးပြီး ဆွေးနွေး တင်ပြကြပါ။ ကရင့် တော်လှန်ရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမယ်ဆိုရင်လည်း ကရင်ပြည်သူ တရပ်လုံးရဲ့ ထောက်ခံ အားပေးမှု အများဆုံး ရမှပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။ နောက်ထပ် အရေးကြီးဆုံး လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကတော့ ကရင် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့အားလုံး အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ကြီးတခု အမြန်လုပ်ပါ။ KNUကို ထောက်ခံတဲ့ ကရင်ပြည်သူတွေ ရှိတယ်။ DKBAကို ထောက်ခံတဲ့ ကရင် ပြည်သူတွေ ရှိတယ်။ KPC ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီကို ထောက်ခံတဲ့ ကရင်ပြည် သူတွေ ရှိတယ်။ ဒါကို KNU ခေါင်းဆောင်တွေ သိထားဖို့ လိုလာပြီး။ အခုအချိန်မှာ ကရင် တော်လှန်ရေးဟာ လမ်းဆုံ လမ်းခွကို ရောက်နေပြီး။ နည်းနည်းလေးမှ အမှားခံလို့ မရဘူး။ အခုအချိန်မှာ ကရင် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ အားလုံးကို
၃။ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ကရင် သမိုင်းမှာ ရာဇ၀င် တင်ခံရမှာပဲ။ ပူးပေါင်းမှု မလုပ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ကရင်ပြည်သူတွေရဲ့ ပစ်ပယ်ခြင်းကို ခံရမှာပဲ။ ဒါကို ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလ အတွင်းမှာပဲ လုပ်ပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ရက် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးနေ့မှာ အားလုံး သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်အောင် အပြီးသတ် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်။ ဗမာစစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းထားတဲ့ ကရင် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့တွေလည်း ရှိတယ်။ သူတို့လည်း ကရင်တွေပဲ။ ဒီဆွေးနွေး ပွဲကြီးမှာ သူတို့ကို လေ့လာ သူများအဖြစ် ဖိတ်ကြားရမယ်။ အခုချိန်မှာ ကရင် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့တွေလည်း လမ်းဆုံလမ်းခွ ရောက်သွားပြီး။ သူတို့သမိုင်း သူတို့ ဘယ်လို ရေးမလဲဆိုတာ အဆုံးအဖြတ် ပေးရမယ့် အချိန်ရောက်လာပြီး။ ပါဝင် ပူးပေါင်းမှု မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကရင်ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်မှုကို ပိုပြီး ထပ်ခံရဖို့ပဲ ရှိတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကြီးဟာ ကရင် လူမျိုးတွေရဲ့ အနာဂတ် ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးမယ့် ဆွေးနွေးပွဲပဲ။
စောသစ္စာထူး။ ။ ကရင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အားလုံးမှာ ဘယ်သူတွေ တွေ့ကြရင် အကျိုးများ နိုင်မလဲ။
စောဘဦီးကြီး။ ။တချို့ နိုင်ငံရေး စစ်ရေး ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အသက်ကြီးလာ လေလေ အာဏာမာန် ကြီးလာ လေလေပဲ။ ဥပမာ-KNU, DKBA, KPC ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ တွေ့ကြရင် KNU ခေါင်းဆောင် တချို့က KPCခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်ကို သစ္စာဖောက်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ထိန်မောင်ကလည်း KNU ခေါင်းဆောင် တချို့ကို KNUကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုး အတ္တသမားလို့ ပြန်ပြောနိုင်တယ်။ သူ့ကို ကိုယ်အပြစ်မြင် ကိုယ့်ကို သူအပြစ်မြင်နဲ့ ဘယ်လိုမှ အကျိုးမရနိုင်တော့ဘူး။ ကရင့် တော်လှန်ရေးမှာ ငယ်ရွယ်တုန်းက ဆက်ဆံရေးတွေ အဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့်လည်း အသက်ကြီးလာတော့ အာဏာ မာန်မာနတွေကြောင့် ကွဲသွားကြတဲ့အထိပဲ မဟုတ်လား။ ဘယ်လောက် ရင်နာဖို့ကောင်းလဲ။ ဒါကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲ မဖြစ်ပဲ လက်ဝှေ့ပွဲဖြစ်သွားရင် DKBAဗိုလ်ချုပ် စောလားပွယ် ဖြန်ဖြေရမယ့် အခြေအနေ မျိုး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေ တွေ့တာထက် လူငယ် ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့တာက ပိုအကျိုးများပါတယ်။ ဥပမာ-KNUမှာဆိုရင် ဗိုလ်မှူးစောလှငွေတို့လို DKBAမှာဆိုရင် ဗိုလ်မှူး စောဆန်းအောင်တို့လို KPCမှာဆိုရင် ဗိုလ်မှူးစောဝင်းတင်တို့လို လူငယ် ခေါင်းဆောင် တပ်မှူးတွေ ဆွေးနွေးရမယ်။ နောက်ထပ် ပါဝင်ရမယ့် သူတွေကတော့ ကရင့်တော်လှန်ရေးအပေါ် သစ္စာရှိတဲ့ ကရင်ပညာတတ် လူငယ်တွေပဲ။ ဥပမာ-နန့်ဇိုယာဖန်းတို့လို လူငယ်တွေ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ ကရင့်တော်လှန်ရေးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိတယ်။ လူကြီးတွေကတော့ ၀န်းရံပေးဖို့ပဲ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ကရင် တပ်မတော်ကို တခုတည်း ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ရမယ်။ ဥပမာ KULA(Karen Unity and liberation Army) ကရင် ညီညွတ်ရေး နှင့် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ကို ဖွဲ့စည်းရမယ်။ ဒီတပ်မတော်မှာ မူဝါဒ ၃ခု ချမှတ်ရမယ်။
၁။ ဒီမိုကရေစီ တပ်မတော် ဖြစ်ရမည်။
၂။ ခေတ်မှီလက်နက်ကိုင် တပ်မတော် ဖြစ်ရမည်။
၃။ ကရင်လူထုအပေါ် သစ္စာရှိရမည်။
အခုချိန်မှာ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရတော့မယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲ မဖြစ်အောင် စစ် အာဏာရှင်တွေက နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖျက်စီးလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖျက်ဖျက် မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဒီဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်ရမယ်။ ဒါဟာ ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ အနာဂတ် ကံကြမ္မာပဲ။ ခုချိန်မှာ အိပ်လို့ မအားအောင် ဆွေးနွေးရမယ့် အချိန်၊ အသက်ရှူလို့ မအားအောင် ဆွေးနွေးရမယ့် အချိန်ပဲ။ “ ညီညွတ်မှု တစ်လမ်း နောက်ကျသွားရင် တစ်သက်လုံး ကျွန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။”
စောသစ္စာထူး။ ။ခုချိန်မှာ ကရင့်တော်လှန်ရေးကို ကရင်ပြည်သူတွေက ဘယ်လို မြင်ချင်သလဲ။
စောဘဦီးကြီး။ ။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကရင်ပြည်သူတွေက ကရင့်တော်လှန်ရေးမှာ ကရင်အချင်းချင်း ပြန်တိုက်ကြတာကို မမြင်ချင်ဆုံးအရာပဲ။ စစ်အာဏာရှင်တွေက KNUကို တိုက်လို့ အမြစ်ပြတ်သွားရင် DKBAနဲ့ KPCတို့လည်း အမြစ်ပြုတ် ထွက်သွားမယ်။ DKBAကို တိုက်လို့ အမြစ်ပြတ်သွားရင် KNUနဲ့ KPCတို့လည်း အမြစ် ပြုတ်ထွက်သွားမယ်။ KPCကို တိုက်လို့ အမြစ်ပြတ် ထွက်သွားရင် KNUနဲ့ DKBAတို့လည်း အမြစ်ပြုတ် ထွက်သွားမယ်။ ဒါကို ကရင်ပြည်သူတွေ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကရင့်တော်လှန်ရေးမှာ ကရင် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့အားလုံး ပြန်လည် ပေါင်းစည်းပြီး တခုတည်းသော ကရင့် တပ်မတော်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဟာ ကရင်ပြည်သူတွေ အမြင်ချင်ဆုံး အရာပဲ။
စောသစ္စာထူး။ ။ KNUခေါင်းဆောင်တွေကို အဖူး စောဘဦးကြီး အပြောချင်ဆုံး စကားက ဘာလဲ။
စောဘဦီးကြီး။ ။ဗမာပြည်မှာ လွတ်လပ်ရေး မရခင်တုန်းက ဗမာတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး စကားပြောမယ် ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပြောရတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ယခုလက်ရှိ အချိန်မှာ ဗမာတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး စကား ပြောမယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြောရတယ်။ ဗမာ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေး စကား ပြောမရလို့ ပြည်တွင်း စစ်ကြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်က သက်သေပြ သွားခဲ့ပြီး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၆၀)ကျော်က ကရင့် တော်လှန်ရေးဟာ သွေးပူ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ အခုချိန်မှာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကို အဖူး အပြောချင်ဆုံး စကားက”ကရင့် တော်လှန်ရေးဟာ အခုမှ အစပဲ ရှိသေးတယ်။” လို့ ပြောချင်တယ်။
စောသစ္စာထူး။ ။ တချို့KNU ခေါင်းဆောင်နဲ့ တချို့ ကရင်လူငယ်တွေက အဖူးစောဘဦးကြီးရဲ့ မူ (၄)ချက်ဟာ ခေတ်မမှီ တော့ဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါကို အဖူးဘယ်လို ပြောမလဲ။
စောဘဦးကြီး။ ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပဲကွာ။ ဒီလိုကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးနိုင်တဲ့အတွက် စောသစ္စာထူးကို အဖူးအရမ်း လေးစားသွားပြီး။ ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်တယ်။ အဖူး ချမှတ်ခဲ့တဲ့ မူ (၄)ချက်ကို ပြန်ကြည့်လိုက် -- လောလောဆယ် ၂ချက်ပဲ အရင် ထောက်ပြမယ်။ ကရင့်လက်နက် ကရင့် လက်ထဲ မရှိရင်၊ ကရင့်ကံကြမ္မာ ကရင် ဖန်တီးခွင့် မရှိရင် ကရင်ကျွန် ဖြစ်တာက လွဲပြီး တခြား ဖြစ်စရာ မရှိဘူး။ သခင်ဆိုတာ ထည့်တောင် စဉ်းစားလို့ မရတော့ဘူး။ အဖူးရဲ့ မူ (၄)ချက်ကို ခေတ်မမှီတော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့ သူတွေဟာ -----
၁။ အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင်တွေ
၂။ စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့တဲ့ ကရင့်တော်လှန်ရေးသမားတွေ
၃။ နိုင်ငံရေး အမြင်အားနည်းသေးတဲ့ ကရင်လူငယ်တွေ
၄။ ကျွန်စိတ်ရှိနေသေးတဲ့ ကရင်တွေ
၅။ အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ မှိုင်းတိုက်မှုကို ခံလိုက်ရတဲ့ ကရင်တွေပဲ။
ဒါကြောင့် တချို့ KNUခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကရင် လူငယ်တွေကို အဖူး ပြောချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စစ်ကြပါ။ ငါဟာ ဘယ်အချက်ထဲမှာ ပါနေလဲ။ ပါနေရင် ဆွဲနှုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒီမူ (၄)ချက် မရှိခဲ့လို့ အဖူးတို့ ကရင်လူမျိုးတွေ တရုတ်နိုင်ငံ တိဘက်မြေကို အပြီးအပိုင် စွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ဒီမူ (၄)ချက်သာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် တိဘက် လူမျိုးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး တရုတ်တွေကို ပြန်တော်လှန်မှာ အသေအချာပဲ။ ဒီသမိုင်းကြောင့်ပဲ ဒီမူ (၄)ချက်ကို အဖူး ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီမူ (၄)ချက်ကို မချမှတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဗမာတွေ တိုက်ထုတ်လို့ ဗမာပြည်မှာ ကရင် လူမျိုးတောင် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ နောင်ဆိုရင် "ကရင် လူမျိုးတွေကို ပြတိုက်မှာပဲ တွေ့ရမယ်"လို့ ဗမာစစ် အာဏာရှင်တွေ ပြောခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဒီစကားကို ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် မြပတိုင်ကျေးရွာ ကရင် လူထုတွေကို ဗိုလ်ချုပ်မောင်လှ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော် ကြေညာခဲ့တယ်။ မြပတိုင်ကျေးရွာမှ ကရင်ပြည်သူတွေနဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်တို့က အခိုင်အမာဆုံးသော သက်သေတွေပါပဲ။ အခုလည်း ကြည့်လေ ကရင်လူမျိုးတွေ ဗမာပြည်ကနေ အများကြီး ထွက်ပြေးကြပြီ မဟုတ်လား။ ဒီမူ (၄)ချက်ကို ကရင့် အာဇာနည် တော်လှန်ရေး သမားတွေ ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ အခုချိန်ထိ ဗမာပြည်မှာ ကရင်လူမျိုးတွေ ရှိနေတုန်းပဲပေါ့။ ဒါကြောင့် အဖူးရဲ့ မူဝါဒကို ခေတ် မမှီတော့ ဘူးလို့ ပြောကြတဲ့ တချို့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တချို့ ကရင် လူငယ်တွေကို အဖူးက မေးခွန်းတခု မေးချင်တယ်။
“တရုတ်နိုင်ငံ တိဘက်မြေမှာ ကရင်လူမျိုးတွေ ရှိသေးလား”
အတိတ်သမိုင်းကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြန်မြင်သွားရင် အဖူးရဲ့ မူ (၄)ချက်ဟာ ခေတ်မှီတုန်းပဲလို့ ပြန်ပြီး လက်ခံသွားမယ်။
စောသစ္စာထူး။ ။ KNUနဲ့ ဦးသိန်းစိန်တို့ အဖွဲ့ ထပ်တွေ့ဖို့ ရှိသေးတယ်။ KNUကို အဖူး ဘာမှာချင်သလဲ။
စောဘဦီးကြီး။ ။ နောက်ထပ်တွေ့မယ့် ပွဲမှာ KNUကို ဗမာ ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲမထွက်ဖို့ လက်မှတ် ထိုးခိုင်းမယ်။ ကရင်တွေ ဗမာပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက် မခွဲထွက်ဆိုတာ KNU,DKBA, KPCတို့ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ရှိကြတဲ့ ကရင်ပြည်သူ တရပ်လုံး ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အလုပ်ပါ။ အနာဂတ် ဗမာ့နိုင်ငံရေးကို အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်တဲ့ သူဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်မရရင် ပြန်မလာနဲ့လို့ပဲ မှာချင်တယ်။
စောသစ္စာထူး (USK, United States of Karen) မှ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကရင်လူထုအားလုံးထံသို့ ကျမရဲ့ ဒုတိယပို့စာ
(KNU နဲ့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်
ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်
အခုအချိန်မှာ ကရင်လူထု တော်တော်များများရဲ့ကြားမှာ KNU နဲ့ အစိုးရကြား ပဏာမချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်အပေါ် စိုးရိမ်မူတွေ အများအပြား ဖြစ်နေကြတာကို တနေ့တခြား ပိုပြီး ကြားသိလာရပါတယ်။ ကိုယ့်ကရင်လူထုတွေရဲ့ သောကကိုကြည့်ပြီး ကျမလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ သူတို့နည်းတူပဲ ကျမလည်းထပ်တူ ခံစားရပါတယ်။
ကျမ မှတ်သားမိသလောက်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့ သွားခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေထဲက တချို့ဟာဆိုရင် ဆွေးနွေးပွဲက ပြန်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်မိခင် KNU အဖွဲ့ကနေ ခွဲထွက်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းသွားတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ ကျမတို့အားလုံး သင်ခန်းစာယူပြီး အတူတကွ စဉ်းစားအဖြေရှာကြရအောင်။
ကျမရဲ့ စဉ်းစားချက်တချို့ကို ဒီနေရာမှာ တင်ပြသွားမှာပါ။ စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့လည်း ကျမရဲ့ တင်ပြချက်အပေါ် သဘောတူတာမျိုး ရှိနိုင်သလို သဘောထား ကွဲလွဲတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို အမြင်သဘောထား ရှိသူကိုမဆို ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ကျမအနေနဲ့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကရင်တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့က ကရင်အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတာပါ။ ကျမက သာမန် ကရင်ပြည်သူ တစ်ဦးပါဘဲ။ KNU, DKBA ပြီးတော့ ဘယ်ကရင်ပါတီဝင်တွေနဲ့မှ ဆွေမျိုးတော်စပ်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ခြင်းမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အားလုံးနဲ့ တူတာကတော့ ကရင်သွေးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကရင်လူမျိုး တယောက်အနေနဲ့ ဒီစာကို အစွဲကင်းကင်းနဲ့ ဘက်မလိုက်မိစေဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ရေးသားထားပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့သွားတဲ့ အဖွဲ့တိုင်းဟာ ကိုယ့်လူမျိူးအတွက် မျော်လင့်ချက်တကြီးနဲ့ သူတို့တွေအတွက်ဆို ရန်သူလို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အစိုးရရဲ့ နယ်မြေထဲကိုဝင်ပြီး အခြေအတင် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြတာပါ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားကို ခုတုံးလုပ်ကာ သွားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သူတွေတော့ ပါနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အစိုးရနဲ့ လျိူ့ဝှက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ ခွဲထွက်သွားကြမှာပါပဲ။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ သိမ်းသွင်းတဲ့နည်း
ဗျူဟာတွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အများကြီးရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ချင်းဆီကို ဗမာစစ်တပ်က စီးပွားရေးနဲ့လာဆွယ်တယ်၊ ဆွယ်မရရင် ခြိမ်းချောက်တယ်။ အမျိူးမျိူးပါပဲ။ အပျော့ အမာသုံးတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ ခေါင်းဆောင်တွေ စိတ်ယိုင်မူက ရာခိုင်နှုန်းအရ ပြောရရင် တော်တော်လေးကို နည်းတယ်လို့ ကျမတဦးအနေနဲ့ မြင်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း လူမျိုးအတွက် မျော်လင့်ချက်တကြီးနဲ့ သွားဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ သူတွေရဲ့အပြန်ခရီးလမ်းကတော့ မသာယာပါဘူး။ လူထုအတွင်းမှာဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်မူ၊ ပြစ်တင်ရှုပ်ချမူတွေက သူတို့တွေရဲ့ မျော်လင့်ချက်ကို ဘယ်လောက်ထိ ရိုက်ချိုးခဲ့သလည်းဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ခံစားရမှသိမှာပါ။
ကိုယ့်လူမျိူးတွေရဲ့ ပူပန်မူ၊ လွန်ကဲမူတွေ၊ အဆိုးမြင်ရှုပ်ချမူတွေကို မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး
သူတို့နဲ့အတူတူ ပုခုံးဖက်ကြီးပြင်းလာခဲ့၊ သွားအတူစားအတူရှိခဲ့ဖူးတဲ့ သွေးသောက်ညီအကိုတွေကို ကျောခိုင်းပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သဘောမျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေက ကျမတို့ကြားမှာ နားလည်မူတွေလွဲခဲ့ကြလို့၊ ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့ စိတ်ထားမရှိခဲလို့၊ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် မလေးစားပဲ ဆိုးရွားစွာ ပြစ်တင်ရှုပ်ချတတ်မူ၊ သူတစ်ပါး လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ် အကောင်းမြင်ပြီး ကျေးဇူးပဲဆိုတဲ့စကားလုံးကို မထုတ်သုံးတတ်ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်တွေလို့ဘဲ ကျမမြင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ အတွင်းမှာလည်း ပုဂိုလ်ရေးကိုရှေ့တန်းထားပြီး အချင်းချင်း ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမူတွေလည်း ရှိခဲ့ကြတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကတော့ အဖွဲ့အစည်းကြားမှာ အချင်းချင်းပြိုကွဲခဲ့ရသလို ကရင်လူထုက သူတို့ရဲံမိခင် KNU အဖွဲ့အစည်းကိုပဲဖြစ်စေ၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးချင်းကိုဖြစ်စေ အထင်ကြီးမူ လျှော့နည်းသွားကြပြီးနောက်ပိုင်း ထောက်ခံအားပေးမူတွေလည်း မရှိတော့တာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပုဂိုလ်ရေးကိုမကြည့်ပဲ လူမျိုးအတွက်ကိုသာ ရှေးတန်းထားပြီး လုပ်ဆောင်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဘယ်သူမှ ပြည့်ဝတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ သို့ပေမဲ့လည်း သူတို့တွေ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း ဆက်လက် ရပ်တည်မူအပေါ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွားကြတာပါပဲ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက် အပေါ်မှာလည်း ကရင်လူထုတွေက ဝိုင်းဝန်း ထောက်ခံအားပေးရင် သူတို့လည်းအားတက်လာမှာပဲ။ ရှေ့ဆက် ဘာတွေ ဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်းတွေ ပေါ်လာမှာပဲ။ စိတ်ဓါတ်ကျနေရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အကြံကောင်းတွေ ထွက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊။ အခုချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်အပေါ်မှာ ကရင်လူထုအားလုံးက တောင်းဆိုစေချင်တဲ့အချက်တွေကို သူတို့ဗဟိုကနေတဆင့် သွားရောက်ပြီး ဆွေးနွေးချူပ်ဆိုခဲ့ကြတာပါပဲ။ ချုပ်ဆိုခဲ့တာကလည်းသူတို့က လူထုတွေ
ထောက်ခံနိုင်လောက်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့၊ မြန်မာအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးအပေါ် အကောင်းဘက် ပြောင်းလာနိုင်မူရှိတဲ့အခြေအနေ၊ ကမ္ဘာကလည်း ကရင်တွေနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေ အုပ်စိုးသူအစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတာပိုပြီးတော့ သိမြင်လာတဲ့အခြေအနေအရပ်ရပ်အကြားမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘယ်လောက် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပေါ်လွင်နိုင်မယ့် အချိန်ကောင်းမျိုးမှာ စာချုပ်ကိုစောစောချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာလို့ဘဲ ကျမတော့ မြင်မိပါတယ်။
ဒီစာချုပ်ကလည်း အတည်ပြုရသေးတာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ မူအရပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီမူကို အစိုးရဘက်က အသုံးချတတ်ရင် ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ပြန်ပြီး အသုံးချတတ်ရမှာပါ။ ဒီစာချုပ်က အလကားချုပ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲ လုံးဝကိုအသုံးဝင်တဲ့စာချုပ်ပါ။ ဒီစာချုပ်မှာ ကရင်တွေ အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံး အသုံးချနိုင်တယ်လို့ ကျမမြင်ပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင် အခု ဗမာစစ်တပ်တွေ ရိက္ခာတင်ပို့မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီစာချုပ်ကို ကျမတို့အသုံးချနိုင်ရမယ်။ ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့၊ ရိက္ခာစုဆောင်းပြီး စစ်တပ်အင်အား တိုးချဲ့ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးတွေကို အစိုးရဘက်က လုပ်လာရင်လည်း KNU ဘက်က စာချုပ်ရဲ့ ပထမအချက်နဲ့ ဒုတိယအချက်ကို ထောက်ပြပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက် သွားသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသမှာ တိုင်းရင်းသားတွေသဘောမတူဘဲ သယံဇာတထုတ်သုံးနေတာကို စာချုပ်ရဲ့ ၄ ချက်မြောက်အချက်ထဲ
မှာပါရှိတဲ့ 'ဒေသခံပြည်သူများ ပါဝင်ပတ်သက်သော စီမံကိန်းမှအပ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အတိုင်းအတာ ပမာဏကြီးမားပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား နှစ်ဖက်စလုံးမှ စတင်မူမပြုရ' ဆိုတဲ့အချက်ကို ကျမတို့လုံးဝ ထောက်ပြလို့ရပါတယ်။ ကျမတို့ဘက်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအသုံးချပြီး KNU ဘက်က အမြန်ဆုံး ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ ကျမတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကျမတို့ကရင်တွေကိုလည်း အစိုးရိမ်မကြီးကြပါနဲ့ သတိရှိရှိနဲ့သာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ် လုပ်ဆောင်ကြပါ။ ကမ္ဘာကသိအောင် ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်အပေါ်မှာ အစိုးရဖက်ကနေ ချိုးဖျက်လာရင်တော့ ကျမတို့ကရင်တွေ နှစ် ၆၀ ကျော်ကိုင်လာတဲ့လက်နက်ကို ဆက်ကိုင်မလား၊
ဒါမှမဟုတ် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ကမ္ဘာကသိအောင် ခွဲထွက်ခွင့်စပြီး တောင်းဆိုကြမလားဆိုတာသာ စဉ်းစားထားကြပါ။ ကျမတို့အားလုံးအတူတကွဝိုင်းပြီးအဖြေရှာကြရတာပေါ့။
နောက် လာမည့်တတိယစာထဲမှာတော့ ဟိုယခင်တုန်းက ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုတွေနေ ဘာတွေအောင်မြင်မှုရခဲ့၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့လဲ၊ ကျမတို့တွေအားလုံးအတွက်ကော အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတကယ်ရှိခဲ့၊ မရှိခဲ့ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပြရေးသားချင်ပါသေးတယ်။
သတင်း Articles, INTERVIEW
New York Time ပြောပြသည့်ှဗမာစစ်တပ်နဲ.တိုင်းရင်းသားများစစ်ပွဲ (ဗွီဒီအိုရုပ်သံ)
Despite the war against the Kachin, Mr. Thein Sein,aformer general, has tried to quell other ethnic conflicts and push reforms, like his release of 651 political prisoners last week. After the release, the Obama administration upgraded relations by agreeing to exchange ambassadors.
ဒို.လွတ်လပ်ရေးအမြန်ပေး၊ကိုလိုနီစနစ်အလိုမရှိ၊ We fight for Independent
ဒို.လွတ်လပ်ရေးအမြန်ပေး၊ကိုလိုနီစနစ်အလိုမရှိ၊ We fight for Independent,
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် KIO မှ မြန်မာအစိုးရသို့ တင်ပြသော စာတမ်း
သတင်း VDO, မှတ်တမ်း Record
လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသားခွင့်သတင်းနဲ.ရှုပ်နေသည့်အချိန်ကချင်ပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲပြင်း 44th LID opensanew offense
ကေအိုင်အိုထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို.တော်ဖြစ်သည့်မိုင်ဂျာယန်နဲ.နီးစပ်သည့်နေရာတွင် ဗမာစစ်တပ်တပ်မ (၄၄)ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိသည်၊နမ်းခမ်းဘက်၊သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသူရွာသားအယောက်(၆၀)လောက်ကိုဗမာတပ်ခလရ ၁၃၈ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟုသတင်း၇ရှိပါသည်၊
Burmese Army Arrested 60 Local Residents
Burmese Army soldiers under 138th LIB who were transported from Nam Hkam in Northern Shan State arrested and detained 60 local residents including women and children at Kawa Pang village on Jan 11, 2012 at 8 am. Local residents, mostly Kachins, are believed to be used as porters and human bomb-shields in Kachin battle fields.
Inasimilar incident, Burmese soldiers under 138th LIB took school children for porters and human shields after failing to find adults who had run into the jungle upon hearing the news of Burmese Army’s arrival at Hka Garan village on Jan 6, 2011.
44th LID opensanew offense
In an attempt to get closer to Mai Ja Yang, KIO’s second largest city, Burmese Army’s 44th LID (Chay Myan Tat Ma 44) beginsanew offense near Maru Ying Sau village, saidalocal source.
Burma forum 01-01-2012 ပင်လုံညီလာခံနဲ.စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စု by Ethnic Voice of Burma
သတင်း Campaign, အမြင်များ
Bogyoke Nyar De wasasong popularized by Shan singer Sai Seng Mong in the early1970’s. It was in reference to the unrealized promises of equality that Bogyoke Aung San pledged to the minorities at the time of Panglong. Although it was not fair to blame the Bogyoke, as his life was tragically cut shot before he could implement his promises, the song struckachord with the Shans and other ethnic minorities because it symbolized the frustrations they felt over the inequalities that exist between the minorities and the majority Bamas.
The ethnic minority signatories of the Panglong Agreement had their misgivings about joining hands with the Bamas from the very beginning. Duwa (Maj) Shan Lone, who served as Secretary of the Panglong Conference, recounted in his memoirs,apivotal conversation Bogyoke Aung San had with the Shan leaders at Panglong. Bogyoke was making courtesy calls on the hill tribes leaders at the close of the plenary session on the second day of the Conference. At his meeting with the Shan leaders, Sao Shwe Thaik, the Sawbwa of Yawngwhe, bluntly told Bogyoke Aung San that although they trusted him, they did not trust the other Burmese leaders. Bogyoke countered by telling them to put their trust instead in the constitution they would be drafting together. The Shan leaders were won over, and addressed their concerns inaclause in the constitution that accorded them the right to secede from the union if they so wished, afteraperiod of ten years. History will attest to how well that went. It was this very clause that General Ne Win used to justify his military coup of 1962.
The ethnics did not fair too well under the parliamentary democracy of Prime Minister U Nu either. Duwa Zanhtar Sin, former Head of Kachin State, in his booklet Democracy Byaungbyan (Democracy Upturned), chronicled how U Nu and his party tried to meddle in the affairs of Kachin State inamost undemocratic way. He found U Nu’s shenanigans particularly galling, given the fact that U Nu had often, in his Union Day and Martyr’s Day speeches, acknowledged the contributions of Kachin servicemen and lauded them as saviors of the newly independent republic. It isahistorical fact that the Kachins, together with other ethnic minorities, playedamajor role in protecting the country againstamyriad of insurgencies and helped bring it back from the brink of disintegration. If U Nu’s tributes and expressions of gratitude sounded hollow then, the army’s treatment of Kachins today is harrowing to say the least.
General Ne Win, he of the infamous “shoot straight and not into the air” order, and successive army juntas have used brute force asameans of subjugating public unrest. They are, as someone elsewhere has said, “equal opportunity oppressors”, brutally mowing down all who challenge or are perceived to challenge their authority, irrespective of age, gender, creed, social standing or ethnic origin. Muslim Rohinjas, Karen or Kachin Christians, students, workers, even the revered Buddhist Sangha have borne the brunt of their wrath.
And now we have former General Thein Sein, widely lauded asamore moderate and reform-minded leader. His image polishing efforts may be paying off internationally, but to the Kachins, he is just another general whose words cannot be trusted. It has been more thanamonth since he made public his order to end the army’s offensive against the KIA. But there has been no cessation of hostilities. On the contrary, more than 90 battles or clashes have taken place, withasteady surge in troop reinforcement since then.
What of the General’s daughter – the Lady, the Nobel laureate? Ethnic groups had looked to her as the one Burmese leader they could trust, the one with the integrity, the charisma and capability to rally everyone behind her as her father once did. The Kachins also, had pinned great hopes on her, as someone with the international stature to intervene on their behalf in the face of the army’s onslaught. The KIO even held an unprecedented birthday celebration for her at Laiza, attended by none other than the KIO Chairman himself.
The KIO was clearly sending heramessage. But how did the Lady react? With deafening silence. No condemnation of atrocities against helpless Kachin civilians, of chemical weapons being deployed. No statement of sympathy or solidarity with the suffering of the IDPs. No appeals made to international organizations or governments for humanitarian assistance. Mere platitudes like the need to end hostilities in ethnic areas, and offers to mediate, are of no help when the aggressor, the instigator of this genocidal war is not identified and condemned.
Where is her much touted fairness or moral courage? When the NLD did finally offer aid, following the lead of the Free Funeral Service, it wasacase of too little too late. What the Lady seems to fail to understand is that this current onslaught is not justawar against the KIA, butawar against all Kachins. For the Kachin population, it isawar of survival. How can she hope to rally the Kachins behind her after this? The Kachins have been burned so often, it would be difficult, if not impossible, to put this latest betrayal behind them and learn to trust and cooperate with the Bamas again.
Even now, Kachin internet chatter is getting louder and louder for outright independence, not just mere federalism. Whether that isapragmatic goal to pursue or not is open to debate. Federalism, an anathema to the present government as it had been to previous military regimes, would be an equally elusive goal. It would seem that we Kachins do not have many good choices.
The KIO has now agreed to enter into talks with President Thein Sein’s delegation. It is the right thing to do, as it is in keeping with the KIO’s long standing declaration of its openness to genuine political dialogue. But asaDavid facing offaGoliath of an enemy, the KIO/KIA can takeapage from the Biblical story of David. Just as David managed to slay the mighty Goliath withasingle slingshot aimed at Goliath’s Achilles heel, his unprotected forehead, the KIO would be well served to strategize and use the government’s soft spot – be it international opinion, fear of Chinese hegemony, discord within the army/civilian leadership, or some other factor – to its best advantage.
Whether the talks will lead toajust and peaceful resolution remains to be seen. Our best hope is that there will not beareplay of Sai Seng Mong’s song, that President Thein Sein does not turn out to be just another general who lied.
Daughter of Pangmu
No political Prisoners, said Burma FM by Ethnic Voice of Burma
သတင်း စ, သတင်း။ News